मनोरञ्जन वार्ता – JanaSanchar.com
जस्तोसुकै दृश्य दिन तयार नायिका उषा खनाल
कलाकार र समाजसेवि बन्ने चहाना बोकेकी नायिका उषा खनाल अहिले यहि क्षेत्रमा निरन्तर लागिरहेकी छन् । पछिल्लो समय व्यस्त रहेकी नायिका खनालले विगत आधादशकदेखि नेपाली कलाक्षेत्रमा आफ्नो कलाकारिता पस्कदै आईरहेकी छन् । डेढ सय म्युजिक भिडियोमा मोडलिङ गरिसकेकी खनाल निर्माणधिन चलचित्र ‘बीर बहादुर’मा अनुवन्ध भएकी छन् । पश्चिम, दाङमा जन्मेकी उनले..
जीम पश्चात यस्तो देखिईन केकी
टेलिभिजन कार्यक्रम कमेडी च्याम्पियनबाट टेलिभिजनमा पनि आउदै गरेकी केकी दिपक राज गिरीको आगामी चलचित्र ‘छ भने छपक्कै’ मार्फत दर्शक माझ आउदै छिन । आफ्नो शरीरको तल्लो भाग बढी मोटो भएको केकी बताउछिन । फिटनेसले आफ्नो स्वास्थ्य त राम्रो राख्छ नै सुन्दरता पनि बढाउने अभिनेत्री केकी अधिकारीको बुझाई छ । सन् २०१० मा फिल्म ‘स्वर’ बाट डेब्यू गरेकी..
हाम्रो मायामा बैरीको आँखा लागेको हुनुपर्छ, टुट्यो : नायिका रिमा विश्वकर्मा
रिमा विश्वकर्माका पहिचान धेरै छन् । पत्रकार, नायिका हुँदै उनी चर्चित उनीले दर्जन चलचित्र तथा विज्ञापनहरुमा अभिनय गरेकी छिन् । परिवारसहित बेलायत बस्दै आएका व्यापारी रोवर्ट ल्वागुन विश्वकर्मासँग बिबाह गरेकी अभिनेत्री रिमा विश्वकर्माको पछिल्लो समय वैवाहिक जीवन बिग्रिएपछि चर्चामा छिन् । उनै रिमासँगको रेजिना पाण्डेको जम्काभेट..
गायिका सरस्वती लामा आफ्नो गायकीका लागि भन्दा बढि छाडापनका लागि चर्चित छिन् । स्टेज शोहरुमा उत्तेजक हर्कत र यूट्यूवमा ‘अश्लिल’ कुराकानीले गर्दा उनको बदनामी भइरहेको छ । हालै बाँकेको कोहलपुरमा आयोजित एक महोत्सवले गायिका लामालाई विवादमा ल्याएको छ । उनले गीत गाउने क्रममा अश्लिलता प्रदर्शन गरेपछि कार्यक्रम नै रद्द गर्नुपरेको खबरहरु..
नायिका केकी अधिकारी श्रीमती बन्न अयोग्य : नायक नाजिर
यही शुक्रवारबाट नायक नाजिर हुसेन अभिनीत फिल्म ‘राज्जा रानी’ प्रदर्शनमा आउँदैछ । पछिल्लो पटक प्रदर्शनमा आएको फिल्म ‘गाँठो’ बक्स अफिसमा असफल हुँदा ठूलो झट्काको सामना गर्नुपरेका नाजिर यो फिल्मलाई भने दर्शकको साथ मिल्नेमा विश्वस्त छन् । उनी फिल्मले मनोरञ्जनसँगै सन्देश दिने बताउँछन् । फिल्ममा नायिका केकी अधिकारीसँग रोमान्स गरेका..
तपाईंको नामको अर्थ के हो ? प्रकाश । ज्योति मगर र सनी लियोनको अंग प्रदर्शनमा के फरक छ ? सनीलाई विश्वले चिन्छ, मलाई नेपालीले मात्र । सबै नारी एकैनासका हुँदैनन् । मैले सनीले जस्तो देखाउनै नहुने कुरा देखाएकी छैन । ज्योति मगर स्टेजमा मर्यादा राख्दिनन् भन्छन् नि ? हो र ? सुनेर दु:ख लाग्यो ! यद्यपि ओहो च्वाक रहेछ, सेक्सी रहेछ– भन्दैमा मर्यादाको..
हाँस्यकलाकार दिपाश्री निरौलाले आफ्नो विवाह अब नहुने नै घोषणा गरेकीछिन् । उनले भनेकीछिन्,‘ज्योतिषले भविष्य निर्माणमा लाग्नु भन्नुभएको छ, हुन त विवाह गरेर पन आफ्नो करियर बनाउन सकिन्थ्यो होला तर जुरेको छैन । कसरी विहे गर्नु ? विहे भन्ने कुरा कहिले होला कसरी होला ? त्यो फरक कुरा हो । म प्रकृतिको विरोधी होईन। तर भावीले मेरो विवाह लेखेकै छैन।’..
ब्याईफ्रेन्ड भनेको बोका बोका,राँगा रागाँ टाइपको फिल हुन्छ -ज्योति मगर
ज्योतिजी, आजकल केमा ब्यस्त हुनुहुन्छ ? गीत सँगीतमै ब्यस्त छु भन्नुपर्‍यो । विभिन्न कार्यक्रमहरुमा सहभागी हुने र अब नयाँ एल्बमको तयारीमा रहेको छु । स्वदेश विदेश गरिरहनुहुन्छ पैसा त निकै कमाउनुहुन्छ होला ? अँ ठीकै छ भनौ । नढाँटी भन्नुपर्दा कमाई भएपनि खर्च पनि राम्रै भएका कारण बचाउन सकिएको छैन । यसपालिको तीजमा त यसअघिका तीज गीतभन्दा..
बलिउडमा कमै कलाकार होलान, जो रञ्जित गजमेरको विषयमा अनभिज्ञ छन् । हिन्दी फिल्ममा सबैभन्दा पहिले मादल प्रवेश गराउने श्रेय जान्छ, गजमेरलाई। उनले भारतका लोकप्रिय कलाकार देव आनन्द अभिनित फिल्म ‘हरे कृष्ण हरे राम’ को चर्चित गीत ‘कान्छी रे कान्छी रे’ मा मादलको आवाज दिएका थिए। मुम्बईमा बसेर नेपाल र नेपाली संस्कृति तथा लोकबाजाको प्रवद्र्धन..